Beydhabo Oo maanta ka furmayo shir looga hadli doono Isgaarsiinta – hareerley News
Diyaaraddii ugu horreysay ee gargaar sida Oo gaartay Baladweyne
Garoonka Diyaaradaha Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan waxaa ka degtay diyaarad sida gargaarkii ugu horeeyey oo ay u dirto Dowladda Soomaaliya halkaas oo dadka ku nool uu saameeyey fatahaada uu sameeyey Wabiga Shabeelle. Diyaaradaas gargaarka sida oo ka baxday Magaalada muqdisho ayaa waxaa la socda Xubnaha Guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu shalay Magacaabey Ra’iisul […]
Kim Jong-un walaashiis Kim Yo-jong: Waa kuma ninka guursaday gabadha la dhalatay Kim Jong-un?
Sannadihii ugu dambeeyay, Kim Yo-jong ayaa si wayn uga soo muuqatay saaxadda siyaasadda iyo hoggaanka caalamka waxayna noqotay shaqsi muhiim ah oo udub-dhexaadna u ah awoodda Pyongyang. Waa da’da ka yar hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un – waxay dhalatay sannadkii 1987 – waana qofka kali ee ka midka ah walaalihiisa ee ay sida aadka ah […]
Hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa amar ku bixiyay in dhammaan Ciidanka xoogga dalka ay ka baxaan Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed. Hogaamiyaha waxaa uu sheegay in Ciidanka laga doonaayo in ay taggan saldhigyadda ay ku leeyihiin duleedka Magaalada iyo sidoo kale furaha dagaalka, islamarkaana Askari Milatari oo hubeysan […]